Raw LCZ696 poda (936623-90-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / LCZ696 upfu (936623-90-4)
Rating: SKU: 936623-90-4. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva pa gramu kusvika kuhutano hweLCZ696 powder (936623-90-4), pasi peCGMP mutemo uye nehutsika hwehutano hwehutano.
LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) inhengo yeboka idzva renhengo dzinonzi angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) iyo inosanganisira neprilysin inhibitor uye angiotensin receptor blocker (ARB). LCZ696 powder ikozvino inoratidzwa mukurapa varwere vane mwoyo kusakatika nechepakati tsatsana ejection (HFrEF) munzvimbo yei angiotensin inoshandura enzyme (ACE) inhibitor kana ARB yoga. Zita rekutengeserana kweLCZ696 powder ndiro Entresto.
LCZ696 powder video
LCZ696 powder Basic Characters
Name: LCZ696 powder
Molecular Kurema: 915.98
Storage Temp: pa -20 ° C 3 makore Poda
LCZ696 powder mukuderedza mungozi yepfungwa yekufa nemwoyo
LCZ696 powder, sacubitril powder, valsartan, LCZ 696, LCZ-696
Raw LCZ696 powder Usage
LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) inhengo yevadzidzi vatsva vanonzi angiotensin receptor-neprilysin inhibitors (ARNIs) iyo inosanganisira neprilysin inhibitor uye angiotensin receptor blocker (ARB). LCZ696 powder ikozvino inoratidzwa mukurapa varwere vane mwoyo kusakatika nechepakati tsatsana ejection (HFrEF) munzvimbo yei angiotensin inoshandura enzyme (ACE) inhibitor kana ARB yoga. LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) yakagamuchirwa neDFA munaJuly 2015 kuderedza dambudziko rekufa kubva pamigumisiro yepfungwa uye kupararira kwemoyo kusakatika kune varwere vane moyo usingagumi kusagadzikana, NYHA chidzidzo II-IV, uye chikamu chiduku chinokonzerwa. Kubatanidzwa kweeprilysin inhibition uye renin-angiotensin aldosterone system (RAAS) migumisiro yakaratidzwa kuva yakakwirira kune yeACE inhibitor. Zita rekutengeserana kweLCZ696 powder ndiro Entresto.
Mutengo unotanga muzana ndeye 49 / 51 mg kaviri zuva rimwe nerimwe.
Chikamu chekutanga cheLCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) 24 / 26 mg kaviri zuva rimwe nerimwe rinokurudzirwa kuvarwere vanotevera:
• ACE Inhibitor kana ARB naive
Yakaderera dose ACE inhibitor kana ARB kurapa: yakaderera dosi ACE inhibitor yakaenzana: enalapril <= 10 mg zuva nezuva, yakaderera dosi ARB yakaenzana: valsartan <= 160mg zuva nezuva
Yakanyanya renal basa (GFR <30ml / min / 1.73m 2)
• Nhamba yepamusoro yehepatic impairment (Child-Pugh class B)
Warning on raw LCZ696 powder
LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) inoratidzirwa kuti kuderedze njodzi yepfungwa yekufa uye mwoyo kusakatika hospital hospitals nekuda kwekushaya simba kune varwere vane HFrEF isingaperi, NYHA chidzidzo II-IV. LCZ696 poda yakasviba (sacubitril / valsartan powder) inofanira kushandiswa pamwe chete nedzimwe GDMTs panzvimbo yeACE inhibitor kana ARB.
• Hypersensitivity kune chero ipi zvayo.
• Kusagadzirisa kushandiswa kweACE inhibitor: LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) haifaniri kutarisirwa mukati meawa 36 ekugamuchira ACE inhibitor.
• Kusagadziriswa kushandiswa kweaiskiren kune varwere vane chirwere cheshuga mellitus.
• Nhoroondo ye angioedema inobatanidza nekurapa yapfuura neACE inhibitor kana chirwere cheArb.
(1) Fetal toxicity: Zvose zvinodhaka zvinoshanda paRAAS zvinogona kukonzera kukuvadza kumucheche paunopiwa panguva yekuzvitakura. Zvinogona kuderedza fetal renal work mu yechipiri nechetatu mamiriyoni ekudzivirira nekuwedzera fetal uye neonatal morbidity uye kufa. LCZ696 pfumbu yakasviba (sacubitril / valsartan powder) inofanira kuregererwa kana kuberekwa kuonekwa.
(2) Angioedema: Angioedema yakashumwa se 0.5% neLZC696 (sacubitril / valsartan powder) uye 0.2% ine enalapril panguva yechipiri-mapofu mu PARADIGM-HF. Ikoko kwaivewo nehuwandu huwandu hweMatema nekusina-Black uye kune avo vane nhoroondo yeiyo yeiyoseemaema. Kana angioedema ichiitika, LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) inofanira kuregererwa uye inOFANIRA irege kubhadharwa. LCZ696 pfumbi yakasviba (sacubitril / valsartan powder) haifaniri kushandiswa kune avo vane nhoroondo ye angioedema yakabatana neACE inhibitor yapfuura kana kuti ARB therapy. Kana kushanduka kuenda kana kubva kuACE inhibitor, chirwere che 36-hour chekudzivirira chinodiwa pakati pezvinodhaka.
(3) Hypotension: LCZ696 pfumbu yakasviba (sacubitril / valsartan powder) inoderedza kushanda kweropa kuburikidza nekudzivirira kweRAS uye inogona kukonzera zviratidzo zvehutano. Mune nguva mbiri-mapofu yePARADIGM-HF, 18% yevarwere paLCZ696 yai yakasvibirira (sacubitril / valsartan powder) yakasangana nemigumisiro yakaipisisa ye hypotension vs. 12% kune varwere vane enalapril. Sezvo kune dambudziko guru kune avo varwere vane RAAS yakagadziriswa, zvinokurudzirwa kururamisa munyu kana kuti kupera kwemavhesi vasati vatanga. Kana zviratidzo zvehutano zvinokonzera, shandura diuretics nemamwe antihypertensives, uye shandisa zvimwe zvinokonzera hypovolemia uye / kana kuderedza muro weLCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder). Kana zviratidzo zvehutano zvinoramba zvichiramba pasinei nekuderera kweLCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder), mushonga unogona kumira.
(4) Yakakanganisika renal basa: LCZ696 poda (sacubitril / valsartan poda) ndeye RAAS inodzivirira mumiriri; Naizvozvo, kuderera kweiyo renal basa kunogona kutarisirwa muvanhu vane njodzi huru kusanganisira avo vane renal artery stenosis. Munguva yakapetwa-bofu yePARADIGM-HF, 5% yeavo vanorapwa neLCZ696 poda mbishi (sacubitril / valsartan powder) uye enalapril yakashuma kukundikana kwechiitiko sechiitiko chakashata. Uye zvakare, kuwedzera muScr> = 50% yakaonekwa mu16% yeavo vakarapwa nezvose LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) uye enalapril. Renal basa rinofanira kutariswa zvakanyanya uye iyo LCZ696 poda (sacubitril / valsartan powder) dosi inofanirwa kudzikiswa kana kumiswa kuitira kukiriniki kwakakosha kuderera mukuita kwetsvo.
(5) Hyperkalemia: Kuburikidza nemhedzisiro yayo paRAAS blockade, LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) ine mukana wekukonzera hyperkalemia. Mune iyo mbiri-bofu nguva yePARADIGM-HF, 12% yevarwere vanobatwa neLCZ696 poda yakasviba (sacubitril / valsartan powder) yakashuma mhedzisiro yakaipa ye hyperkalemia. Uye zvakare, potassium kuwanda> 5.5 mEq / L yakaonekwa mu16% yeavo vakarapwa nezvose LCZ696 powder (sacubitril / valsartan powder) uye enalapril. Kuvhara kwekutarisa kunorayirwa kune varwere vane njodzi zvinhu sekukanganisa kwakakomba kweitsvo, chirwere cheshuga mellitus, hypoaldosteronism, kana kudya kwakanyanya kwe potassium. Kuderedzwa kweiyo kana kudonhedza mushonga kunogona kuve kwakakosha kuchipatara kuwedzera kwakanyanya mu potassium.
Kubva pamusana wekuedzwa kwePARADIGM-HF umo varwere vaitarisirwa kukwanisa kuregerera zvose enalapril uye LCZ696 yakasviba powup (sacubitril / valsartan powder) panguva iyo isina bofu inomhanya muchikamu, zvichida kuti migumisiro iyi iri pasi-yakataurwa uye inogona kunge yakakwirira mumakiriniki.
LCZ696 powder yakakonzera kukura kweBP yakawanda kudarika valsartan mu SHR pasinei nehuwandu hwehuyu hwekudya, iyo yaibatanidza nekusimudzira kwakanyanya mukugadzira urinary sodium uye kushushikana kwekuita basa. Uyezve, kuwedzera BP kuderedza kuitika kweLCZ696 poda yakasvibiswa inotungamirira kukudzivirira kwepfungwa dzakanyanya mumakumbo ane hutachiona.
LCZ696 Raw Powder
LCZ696 powder Marketing
Nzira yekutenga LCZ696 powder kubva kuAASraw